Usoro ihe omumu nke ihe omimi nke ichoputa na izere Malware
Malware bụ okwu a kpụrụ akpụ site n'okwu abụọ "obi" na "ngwanrọ." Enwere ọtụtụ ihe kpatara onye ọ bụla ga - eji nweta malware. Malware nwere ike ịnweta kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka, mebie njirimara, weghaara njirimara data ndị ọrụ, ma ọ bụ nledo na ndị ọrụ. Otu ụzọ ahụ e nwere ọtụtụ usoro malware bụ otu ụzọ nke ịwụnye ha nwere ike isi dị iche iche. N'ụzọ doro anya, ndị na-agba ọsọ adịghị achọ njirimara onye ọrụ iji wụnye malware. Ụzọ kachasị mma iji luso malware bụ iji gbochie ndị agha ahụ ịwụnye malware na mbụ. Otu nwere ike ịgbaso usoro ole na ole iji nyochaa ọnọdụ usoro ahụ ma ọ bụrụ na ha achọpụta na ha abụrụla ndị nwere nsogbu.
Jack Miller, otu n'ime ndị isi ọkachamara ndị ọkachamara, na-ele ụfọdụ ndụmọdụ bara uru iji gbochie kọmputa na malware.
Melite Kọmputa Kọntaktị mgbe nile
A na-echebe kọmputa ma ọ bụrụ na onye ọrụ esite na mgbochi malware, usoro antivirus, ma debe firewall. Usoro niile kwesịrị inwe ntọala ha ahaziri ka ha chọpụta mmelite na nkwụnye aka na akpaghị aka. Na-echeta mgbe nile iji weghachite data n'oge ọ bụla o kwere mee
Ntughari na nbudata na Wụnye Software ọhụrụ
Ozugbo onye ọrụ gbalịrị ịwụnye ihe omume ọhụrụ na ngwaọrụ ha, ha kwesịrị ijide n'aka na ọ si na ebe nrụọrụ weebụ a tụkwasịrị obi. Ọzọkwa, mgbe ha na-eme nke a, ha kwesịrị icheta itinye nchekwa nke kọmputa na elu iji chọpụta ihe ọ bụla nnabata nweghi ikike.
Na-edebe nlekota ozi niile
E nwere oge mgbe ozi imelị na-ewere ụdị ozi email ziri ezi..Echetụla na ebe ọ bụ na email dị site na saịtị a tụkwasịrị obi, na ọ dị mma. Ozi ịntanetị niile na emelitere na-etinye ihe ize ndụ na kọmputa nke mmadụ, ndị ọrụ kwesịrị izere ịpị ya. Ọzọkwa, onye ọrụ ahụ ekwesịghị ibudata nghazi ọ bụla na-ezukọta na email.
Kpachara anya na Popup Windows
Mgbe ụfọdụ ndị na-ahụ maka ịntanetị nwere ike ịchọta popups nnọọ iwe. Ha kwesiri inwe mmetụta dị otú ahụ n'ihi na ndị omempụ na-eji ndị popup ndị a na-agbasa malware. E nwere ọtụtụ ndị na-emepụta ihe site na saịtị ndị ziri ezi nke ndị ọrụ nwere ike iji gbochie ha ebe o kwere omume. Otú ọ dị, ọ bụrụ na onye ọ bụla edobere ya na nbudata onye na-egbochi popup, ma ọ bụ na-ahọrọghị, ha ekwesịghị ịpị njikọ ndị dị na popups. Ebumnuche dị mma ị belata oge ha nwere ike ime ka nsogbu karịa ezigbo. N'ikpeazụ, onye kwesịrị ịdị ọcha site na ngwanrọ ọ bụla a kpọsara site na popups. Ụdị aghụghọ nke ndị omempụ jiri mee ihe bụ iziga mmapụta ndị ọrụ na-ekwuputa na ha achọtara malware na kọmputa. Ha na-agụnye njikọ nke ndị ọrụ nwere ike iji malite ịmezi nsogbu ahụ. Otú ọ dị, njikọ ndị a na-arụ ọrụ dịka onye na-agbasa mgbasa ozi.
Ọ bụ na usoro ahụ adịlarị?
Lezie anya maka mgbaàmà ndị a:
Usoro a dịtụghị ngwa ngwa, na-eme ka ọ daa, ma laghachi ọtụtụ ozi nhiere mgbe ị na-ezipụ ozi ọrụ.
Ọnụ ọgụgụ mgbasa ozi popup na-aba ụba.
Ngwongwo ihe omimi na akara ngosi nke na-apụtaghị n'ebe ọ bụla
Usoro ahụ anaghị eweghachite saịtị ma ọ bụ ebe obibi.
Ime ihe ma ọ bụrụ na ọrịa
Ọ bụrụ na malware ebutewo kọmputa ahụ:
Zere iji kọmputa mee ihe banyere ego ọ bụla.
Nyochaa ọnọdụ nke ngwanrọ nchedo ma ọ bụ ruo ụbọchị.
Nyochaa kọmputa maka nsogbu ọ bụla ma malitegharịa iji tinye mgbanwe ọ bụla.
Gụnye ọkachamara IT ma ọ bụrụ na usoro ahụ nwere nsogbu ọbụla.
Kọwaa onye ọ bụla ọzọ na - eji kọmputa yana ọkwa ya Source .